Ogaden News Agency (ONA) – Gumaysi iyo Adeegayaashiisa iyo Facaada la Nool – Dood Soo Jirtey Abid –
Gumaysi iyo Adeegayaashiisa iyo Facaada la Nool – Dood Soo Jirtey Abid –
Posted by ONA Admin	/ June 22, 2014
Maqaal aad u xiisa badan ayuu ku qoray shabakadaha Cabdiraxmaan Yusuf Al-Qardawi (waxaa dhalay Sheekha Caanka ah Yuusuf Al-Qardawi) oo ah gabayaa, waliba ah Kacaanyahan (Revolutionary ama ثوري ) uu cinwaan uga dhigay (Riix) – تستمر الحياة.. ويستمر الحوار بين الأجيال – Oo laga fahmi karo macnihiisa inuu yahay – Inta la Noolyahay , Dooda u Dhexeysa Facaada way Taagnaan – .
Waxaa qiimi leh habkuu qoraaga u qoray maqaalka, isagoo sheeko ahaan uga qisooday dood dhex martay Facaadda Masar, kuwa hadda jooga iyo kuwii ka horeeyay.
Ugu horeyn wuxuu ku bilaabayaa kuwa hadda odayaasha ah waaguu gumaysanayay Ingriiska dalka Masar oy dhalinyaradii kacdoonka waday ahaayeen iyo facaadii la noolayd ee aabayashood ahaa doodi dhex tiilay. Hab sheekeyn ah oo aad u xiisa badan ayuu kaga qisoonayaa, maadaama uu yahay gabayaa macruufa ah.
Oday ayaa wiilkiisa ku odhanaya: يا بني … أنا أكبر منك، خبرت الحياة، عركتني وعركتها … Wiilkaygiiyow waan kaa weynahay, Khibrad ayaan u leeyahay Nolosha, oo waan calashaday wayna i calalisay nolosha. Mawaxaad hadda doonaysaa inaan rumaysto in Boqortooyada Ingriiska oo ah quwada ugu weyn caalamka maanta, boqortooyada aanay qoraxda ka dhicin eel eh ciidanka xad dhaafka ah iyo maraakiibta dagaal een tirada lahyd, mawaxaad dooni inaan kaa rumaysto inaad ka adkaan kartaan ood Gobanimo taam ah aad ku gaadhaysaan qoryahan jajabka ah eed la ordaysaan?
Wuxuu yidhi qoraaga, sidaa ayuu ninkaa daacadda ah ee wanaagsan ula dooday wiilkiisa 40-meeyadii iyo 50-meeyadii, isagoo ku qanacsan hadalkiisa ayuu ku waaniyay wiilkiisa oo ka qayb-qaadanayay banaanbaxyada iyo dagaaladii qarsoodiga ahaa ee ka socday Masar.
Wiilka ayaa ugu jawaabay buu yidhi sidan; Abbow ma suurtagalbaa inaan ka aamusno xad-gudubka lagu hayo dalkeena iyo karaamadeena? Miyaad ogoshahay in ciida Masar ay ciidnka Ingriiska najaaseeyaan oo xoog nagu gumaystaan?
Odaygii oo la yaaban ayaa intuu indhaha isu geeyay ku yidhi – Laa Xawla Walaa Quwa – ; Ma inaan joogidooda ku faraxsanahay ayaad mooday? Walaahi ayaan ku dhaartaye haday jirto rajo ah malyankiiba hal (واحد في المليون ) in Masar lagu xoreyn karo qoryahan dhalaanka eed wadataan, waxaan ku odhan lahaa raac halgamaaga (الفدائيين ) qudhaydana waan idin raaci lahaa. Laakiin badda ayaad falaysaan .. aabo, waxaad isku taageysaan waa ciidankii Ingriiska oo aan waligood la jabinin. Naftiina ayaad dhalanteed ku luminaysaan. Waxaan jirin ayaad ku luminaysaan.
Wiiilkii ayaa isagoo xasuusanaya sabirkii nabi Ayuub CS odhanaya; Yaa sidaa kugu yidhi aabo. Meela badan oo caalamka ah ayaa Ingriiska lagu jabiyay.
Odaygii ayaa intuu ka boobay hadalka ku dhahay; Yaa sidaa kugu yidhi? Waxaad ii sheegi waa wax mar dhacay oo meel aan muhiim u ahayn ka dhacay oo Ingriiska uu iskii uga tagay, oo hadday doonaan ay joogi lahaayeen. Anaga xaaladeena way ka duwan tahay midaa.
Kumanaan jeer ayay doodanoo kale dhex martay buu yidhi qoraaga odayaal iyo dhalinyaradooda, ha ahaato Masar ama meel kaloo ka mid ah caalamka, muddo ka dibna waxaa la ogaanayay inay dhalinyarada xaqqa ka hayeen odayaasha, oo isticmaarka waa laga guulaysanayay.
Maanta buu yidhi Qoraaga maqaalka, waxaa ka socda Masar dood kale, oo labada garab ee doodaya ay yihiin Odayaashii waagaa ahaa dhalinyardii kula doodaysay aabayaashood inay ku qanciyaan gumaysiga inay iska caabiyaan, arintaasoo waagaa ugu muuqanaysay aqlibiyadda Masaarida waxaan suurtagal ahayn.
Dhalinyaradii waagaa, oo gaboobay, ayaa ka dalbaya dhalinyarada maanta inay u hogaansamaan ra’yiga dadka ka waaweyn, doodan ayaana ka socota Masar buu yidhi qoraaga;
Aabow waan kaa weynahay, Khibrad ayaan u leeyahay Nolosha, oo waan calashaday wayna i calalisay nolosha ii i maqal. Mawaxaad dooni inaan kaa rumaysto dawladda iyo ciidankeeda iyo booliskeeda iyo sirdoonkeeda iyo malaayiinta u shaqaysa iyo kumanaanka maalqabeenka ah ee taageersan, iyo ciidanka –baldajiyada- ee diyaarka u ah inay jarjaraan kuwa mudaaharaadaya, mawaxaad dooni inaan kaa rumaysto inaad ka adkaan kartaan oo dowladda aad jabin kartaan ood isbadal aad doonaysaan iyo dimoqraadiyada aad rabtaan ku dhalinaysaan si nabadgalya ah?
Halkaa ayuu sheekada la marayaa qoraag. Ujeedadiisa waxaa weeye inuu muujiyo, in dhalinyarada ay yihiin kuwa dhaliya isbadalka oo ka adkaada Gumaysiga iyo cadaadiska xukuumadaha. Iyadoo ay facaada ka weyn ee aabayaashood ay ugu muuqato middaa waxaan dhici karin oo ah riyo.
Qadiyadda Ogadenya iyo Halganka ka socda waxaa marwalba waday Dhalinyarada, waxaana u kacayay oo isu taagayay facaada. Waana midda uu Gudoomiyaha JWXO ku tilmaamo inay tahay Qori Isu-Dhiibka Halganka ka Socda Ogadenya. Waana midda uu doonayo gumaysiga inuu soo afjaro, oo umadeena gaadhsiiyo heer ay ka quustaan guusha iyo inay ka adkaan karaan gumaysiga Itobiya.